Madaxwayne Bixii Oo Cafis U Fidiyay in ka Badan 570 Maxbuus Oo ku Xirnaa Somaliland.(Akhriso) – Heemaal News Network
Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto uu goordhaw soo saaray cafis Madaxweyne ugu fidiyay in ka badan 570-Maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee maamulka Somaliland.
Maxaabiistan uu cafiska u sameeyay Madaxweynaha Somaliland ayaa ah Maxaabiista galay dembiyada aan aadka u cuslayn ,waxaana xabsiyada kusii jiri doona Maxaabiista loo heesto dambiyada culus sida dilalka iyo falalka argagaxiso.
Halkan ka Akhriso Wareegtada cafiska loogu fidiyay Maxaabiista Somaliland
WAREEGTO MADAXWEYNE: 01 /04/2020
In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis Guud u fidiyo Maxaabiista dembiyada aan aadka u cuslayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 574 (Shan Boqol iyo Afar iyo Toddobaatan) maxbuus. Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyadda ay ku xukunnaayeen, sida ku xusan qodobka 92 ee Xeerka Ciqaabta Guud. Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista iyo shuduudaha Wareegtadan ku lifaaqan.